बिरालो प्रतिलिपि | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त! बिरालो प्रतिलिपि | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त!
प्रतिलिपि Caटी रंगीन पाल्तु जनावर बिरालोहरु भनेर मा प्ले गर्न सक्नुहुन्छ को विषय मा अनलाइन स्लट खेल आधारित छ Fruity स्लट साइट. यो खेल बीस-पाँच paylines र विभिन्न विजेता तरिका संग पाँच रील हुन्छन्. यो स्लट पृष्ठभूमिमा शहर छिमेकी एक दृश्य र आसपास अपार्टमेन्ट संग सेट गरिएको छ. राम्रो कार्टून शैली ज्याज संगीतको एक विषय संग, तपाईं भर यो खेल रमाइलो गर्न निश्चित हो. कुल मिलाएर, खेल तपाईं मनोरंजन राख्न हास्यास्पद देख बिरालोहरु संग कार्टून विषय प्रदान गर्दछ. यो सट्टेबाजी £ 0.01 संग तर आफ्नो भाग्यशाली दिन सुरु, तपाईं £ 250 एक स्पिन यसको अधिकतम सीमा प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ.
बिरालो प्रतिलिपि विकासकर्ता बारेमा
यो अद्भुत पाल्तु जनावर बिरालोहरु थिम्ड खेल भनेर मा प्ले गर्न सक्नुहुन्छ Fruity स्लट साइट NetEnt विकास भएको थियो. संसारभरि प्ले छन् भनेर अन्तिम दुई दशक देखि लोकप्रिय स्लट खेल सयौं, तिनीहरू केवल कुनै पनि परिचय आवश्यक छैन.
खेल रंगीन बिरालोहरु को प्रतीक केही धनी र रंगीन ग्राफिक्स सुविधाहरू. त्यहाँ हास्यास्पद रातो बिरालोहरु छन्, रिस नीलो बिरालोहरु र दूध को एक बोतल को प्रतीक संग प्यारा गुलाबी बिरालोहरु, एक खेलौना माउस र माछा हड्डी. रातो बिरालो तपाईं को अधिकतम भुक्तानी जीत खोज्न आवश्यक प्रतीक हो 200 पटक आफ्नो शर्त. यो खेल मा तपाईं प्ले गर्न सक्नुहुन्छ को कम सिक्का मूल्य प्रतीक Fruity स्लट साइट को पन्जा प्रिंट छन्. त्यहाँ तपाईंलाई मदत गर्ने एक जोडी विशेष प्रतीक खेल बोनस सुविधा अनलक छन्. तिनीहरूले बिरालो गरेको घण्टी र सुनको बिरालो मूर्ति को प्रतीक हो.
जंगली बोनस: सुनको बिरालो प्रतीक को स्क्याटर घण्टी बाहेक सबै प्रतीक लागि समेट्छ कि जंगली सुविधा छ. जंगली पहिलो रील मा स्ट्याक देखा पर्न सक्छन् र यसले गर्छ जब, रील मा सबै बिरालो प्रतीक2गर्न5धेरै wilds बन्न. त्यसैले तपाईं विशाल पुरस्कार जब यो हुन्छ जित्न सक्छौं. हुँदा पनि तीन बिरालो प्रतीक को कुनै पनि पहिलो रील मा स्ट्याक देखा पर्नेछन्, एउटै रंग को अन्य बिरालोहरु जंगली हुन्छ र यो पनि पुरस्कार को एक राम्रो रकम दिन्छ.
स्क्याटर बोनस: जब तपाईं यो खेल खेल्न Fruity स्लट साइट तपाईंले तीन घण्टी प्रतीक अवतरण संग स्क्याटर सुविधा ट्रिगर गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं त दस मुक्त spins सम्मानित छन् र यी spins कुनै पनि समयमा पुन: ट्रिगर गर्न सकिन्छ.
सारांश: यो एक धेरै अद्वितीय र हास्यास्पद खेल मा तिमी खेल्न सक्छ Fruity स्लट साइट. बोनस को एक विस्तृत विविधता र जंगली मा सबै आधार प्रतीक रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमता संग, तपाईं सजिलै केही भाग्यमानी spins यहाँ विशाल संग पुरस्कार जित्न आशा गर्न सक्छौं.
बेलायत स्लट बोनस अनलाइन | तपाईंको £5फ्री प्राप्त! स्लट…